हालैका वर्षहरूमा, सबै cosmetologists को आश्चर्य, झन् साधारण कालो मास्क बन्दैछ। घरमा, यो blackheads र pimples को को हटाउनु गर्न महिला र पुरुष दुवैले प्रयोग गरिन्छ। यी समस्या मात्र होइन वयस्क जीवनको लागि संक्रमण मा किशोरों मा पाइन्छन्, तर पनि धेरै वयस्क। खुसीको कुरा, तिनीहरूलाई संग सम्झौता छैन विशेष गाह्रो, को रूपमा छ कालो मास्क एकदम चाँडै तयार रही घरमा अनुहार र ठूलो प्रभाव पहिलो आवेदन पछि सजिलै देखिने छ।
blackheads र pimples को को कारण
यस मानिसको एउटा कारण त्यहाँ अनुहार मा सबै साना nuances। मुखासे तिनीहरूले बाहिरी खण्डलाई बाधा किन छ जो मरेको कक्षहरूको सतह, मा इन्जेक्शन देखिन्छन्। तेल छाला अतिरिक्त sebum को मामला मा गठन गरिएको छ। यी कमीकमजोरी अन्त सधैंभरि कालो मास्क राख्न मदत संग (घर मा यो एकदम सरल छ)। आखिर, अनुहार देखिने pimples को, blackheads, र अन्य कमीकमजोरी हुँदा, व्यक्ति मात्र होइन छाला तर पनि परिसर र बेचैनी को उपस्थिति नेतृत्व भन्ने मनोवैज्ञानिक समस्या महसुस।
संघर्ष को विधिहरू
छाला को उपस्थिति पहिले नै फरक मास्क लागू गर्न प्रयोग गरिन्छ जो बालिका बारेमा विशेष चिन्तित छ। यस्तो अद्भुत सुविधाहरू सजिलै फार्मेसी मा खरिद गर्न सकिन्छ, तर यो व्यक्ति एक सय प्रतिशत विश्वस्त छ जसमा प्रयोग गर्न सामाग्री, तयारी छ किनभने जब blackheads र अन्य यस्तै रोगबाट घरमा कालो मास्क, एक धेरै राम्रो प्रभाव दिन गरे।
एकदम अक्सर अनुहार मा कालो मास्क, त्यसको विपरीत, अरूको हँसी गराउँछ वा आश्चर्यजनक हेर्न। यस कारण, समस्या छाला मानिसहरूलाई सौंदर्य सैलून मा यो सेवा प्रयोग गर्न संकोच, त्यसैले यसलाई आफ्नो सिद्ध कालो घरमा (कोइला + gelatin, माटो + जडीबुटी को जलसेक, माटोको पाउडर + खनिज पानी र अन्य पकाउने विकल्प तल दिइएको) मास्क छ ।
मान्छे, कम्तिमा एक पटक यो मास्क प्रयोग गर्न, र अन्य साधन सोच्न छैन। आखिर, यो बरु चाँडै र कुशलतापूर्वक सबै दोष समाप्त।
रंग अद्वितीय मास्क भयावह जवान बालिका, तर महिला उमेर-सम्बन्धित छाला समस्या को छुटकारा रही लागि सबै सम्भव हालतमा प्रयोग तर्साउन छैन। यसलाई कसरी कालो मास्क घर मा अनुहार सफा र यो एक ताजा नजर दिन सक्छ, जस्तो थियो? वास्तवमा, सबै सरल छ: घटक संरचना एक अद्वितीय सक्रिय घटक उपस्थिति परिकल्पना - काले, सक्रिय कार्बन, माटो र चिकित्सकीय माटोको आउन सक्छ जो। यी घटक सफाई उत्कृष्ट गुण र सक्रिय मुखासे, comedones र केही अन्य कमजोरीहरू लड्न सक्ने क्षमता छ।
तेल छाला प्रकार को मालिक तिनीहरूलाई clog गर्न अनुमति छैन व्यापक pores dries र मजबूत जो, सिद्ध कालो मास्क gelatine बिना घरमा बनाएको छ। पैसा को लागि सामाग्री तपाईं एक औषधि पसल वा कुनै पनि विशेषता स्टोरमा फेला, र बनाउने र धेरै समय लाग्न गर्दैन मुखौटा प्रयोग प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ।
निम्नानुसार धन को सबै भन्दा सामान्य प्रकार छन्:
माटो मास्क। सुन्दर modeled गर्न सक्छन् चाँडै छाला हटाउन, यो पर्याप्त ductility र कोमलता छ।
माटो मास्क काले। अघिल्लो embodiment विपरीत, यो थप बाक्लो र वजन मा भारी छ, त्यसैले अनुहार को सजिलो महसुस हुनेछ मात्र हटाउन पछि।
कोइला संग घर मा कालो मास्क पनि गरे हुन सक्छ। एक फिलिम लागू प्रक्रिया गठन मा, हल्कासित छाला कस। यसलाई चाँडै र ध्यानपूर्वक छाला सतह पालन, ताकि चाँडै तपाईं काम गर्न सक्छन् रूपमा यसलाई हटाउन dries।
यी विकल्पहरू सबै अत्यधिक कुशल छन्। उनि लगभग सबै मानिसहरूलाई लागू गर्न सकिन्छ, तर सबै नै यो एक विशेषज्ञ परामर्श गर्न आवश्यक छ।
घरमा कालो अनुहार मास्क तयार रही चाँडै, तर यो एक अविश्वसनीय प्रभाव दिन्छ। निम्नानुसार यसको प्रयोग को लाभ छ:
कुनै पनि प्रकारको माटो को राम्ररी सफाई;
तेल छाला समस्या सुलझाने;
एक अद्वितीय उठाने प्रभाव;
सुनिंनु मा एक महत्वपूर्ण कमी;
छाला पोषण उपयोगी तत्व;
सुनिंनु को रोकथाम;
toxins को उन्मूलन;
अनुहार प्राकृतिक मैट समाप्त दिने।
व्यावसायिक cosmetologists आधुनिक साफ भन्दा धेरै राम्रो कालो स्पट हटाइ, कुनै कुरा यो के गुण हो द्वारा घरमा कालो मास्क प्रयोग भन्छन्।
मास्क यस प्रकारको प्रत्येक जो छाला यसको आफ्नै प्रभाव छ घटक को एक किसिम, सिर्जना छ। राम्रो प्रभाव हासिल गर्न, यो सही उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ। र यो सिर्फ निम्न को nuances थाहा पर्याप्त छ:
सुक्खा छाला प्रकार आदर्श माटो आधारित योगों मानिसहरूलाई (कस्मेटिक वा चिकित्सा)। कोइला सक्रिय मुख्य घटक जो को मास्क, तुलनामा यस्तो विकल्प अधिक चाँडै छाला हटाइएको छन्।
प्रयोग गर्नु अघि, कलाई मा पैसा को एक बिट कारण, संवेदनशीलता लागि परीक्षण र लगभग 20 मिनेट को लागि यो पकड। को राता यस क्षेत्रमा उत्पन्न गर्दैन भने, मास्क प्रयोग गर्नका लागि तयार छ।
कालो मेकअप अनुहार धमाकेदार गर्दा, यो एक स्नान वा शवर पछि सबै भन्दा राम्रो छ अनुहार मा लागू हुन्छ।
पहिले र अन्यथा छाला चोट हुन सक्छ देखि, कुनै पनि peeling हालतमा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ मुखौटा लागू गरेपछि हप्ताको समयमा।
अनुहार धेरै पत्रहरु मा आवश्यक छ मा माटो मा आधारित रचनाहरूको को तयारी को मामला मा, राखेँ।
केवल टी-क्षेत्र मा परीक्षण गर्न उपकरण प्रयोग गर्न, र मात्र त सबै अनुहार भन्दा लागू यसलाई सिफारिस गरिएको छ पहिलो पटक।
मुखौटा हटाउन, एक फिलिम-निर्मित, यो हुन ध्यानपूर्वक माथिको सार्दा पर्छ।
कुल्ला-बन्द उत्पादनहरु मात्र न्यानो पानी संग अनुमति छ, त्यसपछि तपाईं तुरुन्त अनुहार मइस्चराइजर मा राख्नुपर्छ र एक घण्टा बाहिर जाने छैन।
घरमा कालो मास्क
गुणस्तर र परिणाम प्रभाव घर उपाय महंगा उत्पादनहरु लोकप्रिय ब्रान्ड भन्दा झन् खराब छ। समय एकदम बिट र धन को एक न्यूनतम रकम खर्च गर्न हुनेछ तयार। र सही बाटो एक अद्वितीय गर्न क्लेंसेर तल प्रदान व्यञ्जनहरु मदत गर्नेछ।
सक्रिय कार्बन संग भिन्न
मुखासे, मुखासे र अन्य समस्या विरुद्ध उत्कृष्ट क्लेंसेर अक्सर शरीर शुद्ध पार्नुभएर सक्रिय कार्बन को प्रयोजन को लागि प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया, यो घटक सबैभन्दा समस्याग्रस्त क्षेत्रमा शुद्ध गर्न मास्क फिलिम तयार गर्न प्रयोग गरिन्छ। सबैभन्दा प्रभावकारी नुस्खा छ:
gelatine संग घर मा कालो मास्क। , सक्रिय कार्बन छर्रहरुमा को एक जोडी लिन तिनीहरूलाई राम्ररी नाश gelatin 20 ग्राम संग मिश्रण र त्यसपछि न्यानो पानी खन्याउन आवश्यकता तयार (कोटिंग मिश्रण सुक्खामा)। जिद्दी तपाईं कुनै थप5मिनेट, जो पछि यो अनुहार सिधै लागू र आधा एक घण्टा राख्न सकिन्छ भन्दा आवश्यक हो।
दूध विकल्प। एक अधिक महंगा विकल्प, मुख्य सामाग्री हुन्: सक्रिय कार्बन छर्रहरुमा, कागति को रस एक गिलास बोसो दही / दही / खट्टे दूध र बाफ घटेको एक जोडी। सबै घटक छुट्टै कन्टेनर मा मिश्रित छन् बारेमा 3-5 मिनेट जिद्दी र त्यसपछि अनुहार लागू र 20 कुनै अधिक मिनेट राखिएको।
यो चिकित्सकीय एजेन्ट घ्यु प्रयोग गरेर। सक्रिय कार्बन को 2-3 ट्याब्लेटको एक चमचा संग संयोजन गर्न आवश्यक छ, र घ्यु रस को एक जोडी कागति को रस को खस्छ। परिणामस्वरूप बाक्लो मिश्रण आवश्यक छैन यो प्रयोगको लागि तुरुन्तै तयार छ रूपमा, जिद्दी गर्न, र अनुहार मा कायम राख्न 20-25 मिनेट भित्र हुनुपर्छ छ।
एक पारंपरिक सक्रिय कार्बन प्रयोग वास्तविक मान्छे, घर मा मुखासे देखि कालो मास्क देखि प्रतिक्रिया साँच्चै राम्रो मद्दत छ। केही परिवर्तनहरू माथिको कुनै पनि को अनुहार पहिलो आवेदन पछि देखेको। साथै, तयारीमा उनि एक किफायती लागत मा कुनै पनि किराना पसल र फार्मेसी बेचिन्छन् किनभने, पैसा वा आवश्यक सामाग्री फेला पार्न लामो धेरै खर्च गर्न आवश्यक छैन।
कालो माटो - कस्मेटिक्स मा मुख्य सामाग्री मध्ये एक छ, र यसैले यो विशेष लोकप्रिय मास्क:
क्लासिक। पारंपरिक सुक्खा माटो (कालो) वजन kashevidnoy गठन गर्ने एक खनिज वा मनतातो पानी संग मिश्रित छ, र त्यसपछि छाला बारेमा 15 मिनेटसम्म पनि बाक्लो छैन लागू।
स्क्रब। कालो माटो एक मलाईदार ठूलो गर्न कफी मैदान र खनिज पानी संग मिश्रित छ, र त्यसपछि छाला लागू र 20 भन्दा बढी मिनेट राखिएको massaged।
माटो कालो, घर मा मुखासे देखि मास्क तिनीहरूले महिलाहरु सक्रिय कार्बन आधारमा रकम को छैन बुरा प्रेरित भन्न रूपमा। यो केवल एक भव्य प्रभाव, तर पनि केही घटक को एक सुखद सुगन्ध छ। यो अर्थ यो कुनै तरिका स्वास्थ्य को लागि हानिकारक छ किनभने म, हरेक दिन प्रयोग गर्न चाहन्छु, र एक राम्रो परिणाम लगभग तुरुन्त दिन्छ।
चिकित्सकीय माटोको छाला र सम्पूर्ण शरीर को हेरविचार मा एक ठूलो सहायक छ। यसलाई निम्न वाहन प्रयोग गरिन्छ:
कालो fitomaska। अग्रिम तयार स्लज पाउडर एक मलाईदार ठूलो सम्म, chamomile र पुदिना को जलसेक मा भंग गरिएको छ। 25 मिनेट सम्म राख्न आवश्यकता को अनुहार मा।
Buckthorn विकल्प। यस नुस्खा कि हर्बल tincture प्रयोग गरिन्छ सट्टा समुद्र buckthorn तेल बाहेक अघिल्लो रूपमा एउटै हो।
यस प्रकारका मास्क मात्र होइन महिला तर पनि मानिसहरू लागू गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईं toxins र अन्य अशुद्धियों को epidermis देखि गायब जस्तै महसुस गर्न सक्छन् माटो संरचना राम्रो, छाला मजबूत। तिनीहरूले धेरै महँगो छ खर्च र उठयो सबैले गर्न सक्ने व्यावसायिक मास्क संग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् किनभने यस्तो धन को बेफाइदा, पाइन्छन्।
कोइला र gelatin अनुहार मास्क: व्यञ्जनहरु, पकाउने विधि, समीक्षा
स्थायी काजल: समीक्षा र फोटो
घरमा बोटक्स। घरमा बोटक्स गर्न वैकल्पिक
क्लिनिक नमी सर्भर विस्तारित थोरै राहत: समीक्षा, वर्णन, रचना र सुविधाहरू
रेडियो लहर facelift: प्रक्रिया, contraindications र समीक्षा विवरण
Kirillovka, "कोरल द्वीप": समीक्षा, फोटो
संकुचित डिशवशर: विवरण र निर्माताहरु मा समीक्षा
संकट कसरी बच्न? संकट को समय मा एक साधारण व्यक्ति कसरी बच्न?
को Inquisitor गर्ने हो? शब्द रूपमा आउन?
विश्वसनीय सेवा केन्द्र, मर्मत ल्याप्टप
नाममात्र दर र वास्तविक ब्याज दर - तिनीहरूलाई भिन्नता?
मास्को, लक्ष्य र दृष्टिकोण मा मेट्रो निर्माण गर्न योजना
Flatworms: सामान्य विशेषताहरु र संरचना
कसरी छिटो र कुशलतापूर्वक5किलो द्वारा वजन सिक्न